Amar Kukreja's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Amar Kukreja
Amar Kukreja ane makore echiitiko mukuedzwa kweSalesforce. Iye anoshandisa Apex pamwe nezvimwe bvunzo. Iye zvakare anopa zvimwe zvinoenderana neSalesforce masevhisi, kusanganisira yekutanga Salesforce setup uye manejimendi Kuti udzidze zvakawanda nezve Salesforce Github.
China, January 19, 2017 Chishanu, January 20, 2017 Amar Kukreja
Salesforce kuyedzwa kuchakubatsira iwe kusimbisa yako yakagadziriswa Salesforce kusangana uye kushanda pamwe nemamwe mabhizinesi ekushandisa. Chiyero chakanaka chinofukidza ese maSalesforce mamodule kubva kumaaccount kuenda kumatungamiriri, kubva pamikana kusvika kumishumo, uye kubva kumishandirapamwe kune vanobatika. Sezvazviri nemiedzo yese, pane yakanaka (inoshanda uye inoshanda) nzira yekuita Salesforce bvunzo uye yakaipa nzira. Saka, chii chinonzi Salesforce kuyedza maitiro akanaka? Shandisa iyo Yakakodzera Kuyedza Maturusi - Salesforce kuyedzwa